Mid ka mida Isimada gobolada koonfur galbeed Soomaaliya oo cambaareeyay duqaymaha dawladaha shisheeye ay ka gaysanayaan deegaanka. – Radio Daljir
Mid ka mida Isimada gobolada koonfur galbeed Soomaaliya oo cambaareeyay duqaymaha dawladaha shisheeye ay ka gaysanayaan deegaanka.
Agoosto 18, 2012 5:40 b 0
Baar-dheere, Aug 18- Madaxda dhaqanka ee gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay duqaymaha diyaaradaha iyo maraakiibta shisheeye ay ka gaysanayaan gobolada Gedo iyo jubbooyinka.
Suldaan Ibraahim Aadan Buule oo ka mida Isimada gobolka Gedo oo waraysi siiyay Daljir ayaa sheegay inay ka xun yihiin duqaymaha ku soo badanaya goboladaasi oo ay ugu danbeysay mid diyaaradaha dagaalka Kenya shalay ay ka gaysteen deegaanka Barako oo hoos taga degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
Suldaan Buule ayaa dhanka kale sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in magaalada Kismaayo uu ka biloowday bara-kac arintaasna uu xog buuxda ka hayo, Shacabka Soomaaliyeed ee weeraradaasi dhibaatada ay ka soo gaarayaan ayuu ugu baaqay inay u samraan, Suldaanka ayaa tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed ay dhamaan ka soo xirmeen jihooyinkii ay u bara-kaceen xiligii bur-burka hadana ay go’aansadeen inay iimaan-sadaan oo ay ku qancaan dhulkooda qanigaa.
Dhibaatada ay gaysanayaan cududaha shisheeye ayuu Isinkan ku tilmaamay mid ay ka danbeeyaan Soomaalida isagoo ka dal-baday in loo naxo shacabka Soomaaliyeed oo dhibaato isugu jirta colaado,abaaro iyo nidaam la’aan ku soo dhex jiray? tan iyo sanadkii 1991dii xiligaas oo ay bur-burtay dawladdii kacaanka Soomaaliya.
Hadalka cambaaraynta u badan ee ka soo yeeraya Suldaan Ibraahim Aadan Buule ayaa ku soo aadaya xili ay isa-soo tarayaan duqaymaha duqaymo diyaarado dagaal iyo maraakiib shi-sheeye ku hayaan gobolada koonfureed ee Soomaaliya.
Magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari oo siweyn looga ciiday (Sawiro)
Khilaafkii issimada Puntland oo la xalliyey.